Engomeni yezingane mayelana ekwindla Ihlatshelelelwa:
Izinyoni ziyandiza kude ngaseningizimu,
Amahansi, Ehlasela, Cranes.
Yilokho ngempela umhlambi zokugcina
Wings wakhomba kude.
Okuningi fly amadada, ahlanzekile agcwele izinhlanzi namahansi, Swallows, starlings, larks, nightingale, cuckoos, wagtails kanye nezinye izinhlobo ezihlukahlukene, amaningi awo ajwayeleke endaweni abakhe emizini kuphela ngokusebenzisa izithombe. Kodwa abaningi labo abasele.
Kungani asesabi kubanda?
Futhi ezinye izinyoni ahlale khona kuze kuphele ubusika? Ubani akesabi yesithwathwa ezinzima Russian neqhwa ezijulile? Hlobo luni izinyoni kungabonwa unyaka emzini futhi ehlathini?
Izinyoni uthuthe hhayi kuphela efudumele, kodwa futhi ukuze zithole ukudla. Uma une into ukondla emakhazeni, abazi fly away. izimpaphe Warm, ikhono ukuze uthole e amaphakethe, ikhono ukufihla ezakhiweni ezahlukene kanye nosizo womuntu uvumele izinyoni ebusika. Nakuba isikhathi eside ukubanda okwedlulele kungaba ngendlela ephawulekayo ukunciphisa izinombolo zabo. Ngo eziningi inganekwane ka enyakatho abantu ke uthi: "kwakubanda ngakho, ukuthi inyoni eba yiqhwa on the fly."
On umbuzo lokho izinyoni ahlale khona kuze kuphele ubusika emzini, kulula ukuphendula. Ngezinye izindawo evamile balinde ukusuthisa amajuba. Mpunga likhale njalo ekuseni nakusihlwa imihlambi uthuthe usendaweni kokuchitha ubusuku bonke Emithini emikhulu amagceke izingadi sabo enkabeni yedolobha bakhangisa emuva. Magpie, iqhude abavamile, Jay kungabonwa eduze izindlu.
Ngo emoyeni nesithwathwa uyiswa umsindo lesiqophamithi emthini ubudala kuleli paki. Ebusika, kungcono ngisho lula ukuthola umsindo elele koqweqwe iqhwa waphuka futhi ucabangele phakathi kwemithi elingenalutho.
Bayanda emizini enkulu band phakathi kungabonwa amanzi ice-free amadada ngisho ahlanzekile agcwele izinhlanzi namahansi, okuyinto ezidla abantu. Nakuba kuze kube muva nje lezi ubusika izinyoni, amagama nezithombe zazo ivezwa kahle izincwadi, kwaba siyindlala. Ukuncishiswa kwekhabhoni yizinkampani kwandisa zezinyoni emzini, okuyinto kube inkomba yokuthi inhlalakahle ngemvelo yayo.
Peresvistyvayutsya fun at the amafasitela kanye balcony, lapho bebehlala khona: wapha, ubusika izinyoni abamagama ajwayelekile kusuka ebuntwaneni: ondlunkulu, piggy, goldfinches, tinhlobo letehlukene tits - omkhulu futhi onesiqhova, chickadee futhi Tit, eside tailed, kanye nuthatch.
Tits ehlobo emzini kunzima ukubona, kodwa ebusika perekochovyvayut eduze uhlalwe abantu, kungaba ukundiza ukuba kuphele iminyaka zingathengwa iwindi ajwayelekile.
Imihlambi bullfinches egqamile futhi waxwings abanomsindo undiza kusukela esihlahleni esisodwa noma ezincane-berried Rowan apula kwenye, ushiya eningi iqhwa rasklovannyh amajikijolo. Phakathi ncibilika amajikijolo overripe usungaqala lwalungabola ke izinyoni, ngemva azidle, liziphathe njengomuntu odakiwe. Balahlekelwa ukuma kwabo, zishaya ebondeni nokuwa.
It ubusika izinyoni, esimagama nezithombe - uphawu nomhlobiso isizini ezinzima. Ukuvela bullfinches futhi waxwings njalo ayimkhangi futhi kuyamjabulisa.
Ubusika izinyoni izingane yinto cwaningo nokunakekela. Ndawonye nabazali nothisha bayizingcweti bese ugcwalisa esebenza ngogesi, bheka, ngubani kubo ifika. Buka indlela beziphatha, uma une ukwabelana ukudla, ubusika izinyoni. Enkulisa inkundla nge esebenza ngogesi ukuheha ondlunkulu, tits, amaphuphu kusukela omakhelwane. Yokusanhlamvu, imbewu, udoti kusuka etafuleni, namanoni - bayindlala kakhulu e canteens lezi zinyoni.
Ijuba Heavy ungavula iveli inyoni Element, kubalulekile baziqambela imiklamo ezahlukene ngoba izinyoni ezincane.
Kuyinto njalo ezithakazelisayo ukuze sibone indlela cheeky ondlunkulu ohlwithayo imvuthu kanye imbewu ngaphansi wazinakekela amajuba ezibalulekile. Ngitshiyoza bese uziphonsa emanzini magpies, iqhude hamba okuqinile. Izifundo ezinjengesithi wenhlanganyelo nemvelo ekhumbulekayo kakhulu izingane. Ukwazi okuyinto izinyoni ahlale khona kuze kuphele ubusika emzini ukulungiselela nokuhlanzeka kwangaphandle nokuziphatha kwabo, ukondla ngesikhathi ezinzima - kubaluleke kakhulu. Kuyinto isayensi umusa ingane.
Yini izinyoni ahlale khona kuze kuphele ubusika ehlathini?
North kanye eRussia emaphakathi ebusika wangcwatshwa iqhwa, imifula kanye namachibi iqhwa. Izinyoni zasemanzini kanye marsh izinyoni ukundiza eningizimu. Kodwa lokho izinyoni bahlale khona ubusika amahlathi ethu, observation skiers eyaziwa, abazingeli kanye abathanda ongaphandle.
Ngenkathi ezibandayo kuleli hlathi, ungezwa ubone titmice, Iziqophamithi, Klestov, kedrovok. Ezinye izinhlobo zama-Blackbirds ngimuke, kodwa Fieldfare futhi inyoni emnyama yaseNgilandi ungahlala phezu ebusika e-Leningrad esifundeni ebubanzini, ikakhulukazi uma i-isivuno sasiyoba sikhulu lentaba umlotha. I ezivamile kwabesilisa ubudala.
Kulula ukuthola ukudla ukwazi ukufihla eqhweni nge izilwane ezidla ezinye ezifana izinyoni ezinkulu njengo-grouse grouse emnyama intendele futhi grouse.
Ezidla oklebe, izikhova, isikhova, izikhova, izikhova ebusika e namadlelo ayo zizalela, nakuba ezinye izinhlobo zawo bathuthe kusukela ezisenyakatho ngaphezulu. Betholakala khona hhayi kuphela ehlathini, kodwa futhi amapaki, izingadi, amangcwaba, e imizana suburban, lapho akhanga izinyoni ezincane namagundane.
Uma othile oye wabona futhi wezwa umsindo Ukhumula kusukela yizinyawo izinyoni ezinkulu, ukwesaba ukumangala emhlanganweni onjalo, akunakwenzeka ukuba ukhohlwa.
Laba bameleli be-owesincane zasendle inkukhu - izigwaca, ubusika Afrika, eNingizimu ye-Asia. Kodwa izihlobo zabo grouse grouse emnyama capercaillie futhi intendele bebelokhu ayesifuna ngabomvu ngu ebusika kanye ukukhiqizwa entwasahlobo abazingeli Russian. Inyama ehlathini umdlalo kunobuciko mncane anenhlaka futhi kakhulu.
iqhwa liliningi iwukuba endlini izinyoni futhi embhedeni. Kusihlwa, umhlambi amatshe falling in the iqhwa izihlahla nokufihla kuwo ngenxa yamakhaza nomoya. Ekuseni, uthatha off futhi ukudla izinaliti kanye efihlekile. Ngo kakhulu iphakethe abandayo kungenziwa kwesokunxele eqhweni usuku lonke.
Kodwa iqhwa kungaba lwaba ithuna ezinyonini, uma yakha ngokuqinile uqweqwe futhi hazel grouse noma partridges awanele ukuze ifohle ke uphume.
Futhi uma kukhona abokuqala incibilikiswa, isikhathi kuziwa elithakazelisayo kokuzalela grouse futhi grouse emnyama. Ngesikhathi sokuqomisana iculo bengalaleli lutho, okuyiwona wathola igama lakhe.
Ubusika eside kubangela ezinye izinyoni isitokwe okuqinile. uwukubonakaliswa we eSiberia phakathi abadobi: "Nutcracker wadonsa yonke inhlama." Into wukuthi ngonyaka uma kukhona amantongomane pine kancane, cishe sonke isivuno ezitolo le nyoni. Eqotho, esihlwabusayo ocebile amafutha nuts enempilo ukusiza ukuhambisa nokhahlo ebusika kanye entwasahlobo amaphuphu zikhule. Nutcracker kwenza amashumi ezinkulungwane amabhukhimakhi nuts amaqanda 10-20 ezindaweni ezifihlekile futhi khumbula ezinyangeni ezimbalwa! Ingxenye esitokisini, Yiqiniso, nezinye izakhamuzi zaseMpumalanga ehlathini Kwebiwe chipmunks ukuba amabhere ukhohlwe "ingcebo" hlumela, zisenza sibe entsha laseSiberia zikaphayini zeminqumo.
Yiziphi ezinye izinyoni uthuthele ku izindawo lapho Freaks eziningi imbewu zezihlahla, futhi uphathe ngokungesabi ukuchamisela ngo-February?
Lokhu crossbill. Ezweni lethu, uhlalwe crossbill abomvu. izinyoni ezinhle Motley ngezidladla prehensile futhi Uqhwaku sawela Bites ngokusebenzisa futhi deftly isuswe imbewu ke yokulahla uhlevane emhlabathini.
Ngo-January nango-February baqala ukwakha izidleke bilayer efudumele. Iduna kuletha insikazi ihlezi ukudla esidlekeni, kancane kwamasonto amabili, yena incubates amaqanda, bese kwamanye amasonto amathathu, abazali ukondla amachwane. Ngezinye izikhathi lokushutheka crossbill ukuhlehlisa kuze entwasahlobo, ukuchamisela ngoMeyi.
Ukuze obuka ukwazi uyazi ukuthi ebusika nathi, hhayi kuphela ajwayelekile kubo bonke chickadees namajuba, ondlunkulu, kodwa futhi uthepha umdanso, oatmeal, schury, ama-blood orange, futhi ezintathu noma ezine kweshumi nezinye izinhlobo. Phakathi uhambo futhi izizinda zingatholakala nge ezihlukahlukene abamele izinyoni, ufunde ukuhlukanisa amazwi abo izinyathelo eqhweni. Kwakukhona ngisho zokusebenza zeselula ezikuvumela ukuchaza emkhakheni inyoni amazwi.
Hang lo Element akunzima kusuka ibhodlela plastic, noma uthele imvuthuluka efasiteleni kusuka etafuleni, kodwa kuyathakazelisa ngakho ukubukela izinyoni futhi baqonde ukuthi ukuphila futhi ebusika ngokwemvelo ingabe usekhona.
Amaphethini Indian. Ezingaphezu kwezingxenye ezintathu umhlobiso.